Digniinta Booliska Garmin | Martech Zone
Digniinta Booliska Garmin
Jimcaha, Sebtember 1, 2006 Monday, August 24, 2009 Douglas Karr
Waa tan fikradayda bilyan doollar ee maalinta!
Kawaran haddii Garmin (ama mid ka mid ah aaladaha kale ee khariidaynta baabuurta) lagu dhisay laser / radar detectors oo ay weheliyaan badhanka si loo soo qabto qof soo sheegaya goobta uu ku yaal dabin xawaare ama booliis? Qaabkaas, ka hor intaanan xitaa gaadhin dabinka xawaaraha ama isgoyska la ilaaliyo, qalabkaygu wuu ii digayaa ka hor intaanan ku dhex jirin. Haddii leysarka / radar uusan soo qaadin, qof ayaa wali ku soo wargalin kara badhanka. Warbixintu waxay ku jiri kartaa saacad show oo keliya haddii la soo sheego saacadda gudaheeda.
Ma ihi xawaare, laakiin waxaan isku arkaa inaan helo 1 tigidh 1dii ama 2dii sanaba mar. Iyada oo rikoodh wadis aad u weyn, weligey ma helin nasasho. Way i dhibaysaa maxaa yeelay tigidhada xawaaraha badan ayaa ka yar gaabinta darawallada xun iyo helitaanka nabadgelyo iyo in badan oo ku saabsan kor u qaadista dakhliga gobolka. Taasi ma ahan inay ahaato hadafka tikidhada.
Natiija ahaan, waxaan jeclaan lahaa hab aan uga fogaado gebi ahaanba. Haddii aan iibsan karo aalad sidan oo kale ah, berrina waan samayn lahaa!
Dabada Dheer: Kartoon qosol badan oo ka socda gapingvoid.com